DAAWO: Puntland oo ka hadashay Beelihii sheegay in ay Shareecada Islaamka qaateen.
August 11, 2019 NEWS 4
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweyne kuxigeenka Puntland Axmed Cilmi Karaash oo ka hadlayay magaalada Garoowe ayaa sheegay in ay Xukuumadoodu ka shaqeynayso sidii ay u qancin lahayd beelaha kala duwan ee tabashada muujinaya, isagoo sheegay in shirarka beelaha ee maalmihii u dambeeyey ay yihiin kuwa aan dan ugu jirin Puntland.
In ka badan 3 beelood ayaa todobaadkan gudihiisa shaaciyey in ay qaateen ku dhaqanka Shareecada Islaamka, waxaana loo arkayay talaabo ay u qaateen, ka dib markii ay cabsi ka soo food-saartay kooxaha ka dagaalamaya qeybo kamid ah Soomaaliya.
Madaxweyne kuxigeenka ayaa sheegay in midnimada iyo wadajirka lagu soo caano-maalay, isla markaasna ay doonayaan in lasii adkeeyo, isagoo hadalkiisu u muuqday mid uu kula hadlayo beelaha talaabooyinkan qaaday.
Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu shalay baahiyey xog ku wajahan tabashada beelaha iyo ujeedada keentay kulamadooda ku dhaqanka Shareecada Islaamka, taas oo ahayd in ay heshiis is amaan galin ah la galeen Al- Shabaab.
Warka Karaash, ka dib Madaxweynaha Puntland oo madasha ka hadlay masoo qaadin arrimahan,waxaana Beesha Madaxweynuhu ay ka mid ahayd beelihii ku dhawaaqay go`aankan, mana jirto wax ilaa hadda laga qabtay.
Gobalka Mudug, mid kamid ah beelaha ku dhaqan oo dhawaan ku dhawaaqday talaabadaas ayaa Odayaal badan laga xirxiray, waxaana lagu xukumay 20 sanno oo xarig ah, waxaana dadku ay hadda eegayaan sida laga yeeli doono beelaha Karkaar iyo Nugaal ee talaabadan qaaday.
Jawaabta beelo yiri waxaan ku dhaqmaynaa Diinta islaamka hadal u dhigma am aha hadalka la yiri waxaa yiri Axmad Karaash.Waa hadalka ah dawladoodaa ka QANCINAYSA BEELAHA QAATAY SHAREECADA ISLAAMKA.Erayga qancin waxaa loo isticmaali karaa qof ama qoom wax tabanaya ama cabasho keenay.Laakiin dad yiri hadda laga bilaabo waxaan ku dhaqmaynaa dariiqada Islaamka ma aha in la yiraahdo waan qancinaynaa.Ma waxaa beelahaas lagu qancinayaa lacagataan qaata oo ka hara sheegashada Diinta Islaamka?Taas baa la yiraahdaa qancin.Ama qof wax ka maqan yahiin oo lagu yiraahdo hebaloow fadlan intaas qaado oo raali ahoow waana lagaa gar daraa.
Ma laga yaaba in beelahaanu ay awal diin islaam haysan????
M/weyne Farmaajo & furitaanka kalfadhiga baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya.
Maxaad ka taqaanaa hogaamiyaha Al-Qaacidda ee uu Faransiiska dilay?